Senator Ayuub Ismaaciil oo Mareykanka kula kulmay Congress Man Adam Smith+sawirro – Radio Muqdisho
Senator Ayuub Ismaaciil oo Mareykanka kula kulmay Congress Man Adam Smith+sawirro
Senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federalaaka Soomaaliya oo safar shaqo ku jooga dlka Mareykanka ayaa kulamo kaladuwan la qaatay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Mareykanka.
Kulankii ugu dambeeyey ayuu la yeeshey Mr Adam Smith oo ka tirsan Golaah Congresska Mareykanka,iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo ahmiyadda uu leeyahay.
“Waxaan maanta kulan natiijo miradhal ah leh la qaatay Mr. Adam Smith oo ka tirsan Congress-ka Mareykanka, waxa aan kala hadlay xiriirka labada dal iyo in Soomaaliya laga saaro liiska dalalka xayiraadda socdaal uu saarray Mareykanka,kulanka oo aan iskula eegnay xiriirka taariikhiga ah ee labada dal u dhexeeya, iskaashiga iyo wax wadaagga istiraatiijiyadeed, waxa aan is tusinay muhiimadda ay leedahay in loo howlgalo sidii Soomaaliya looga saari lahaa liiska wadamada dadkooda laga xanibay inay socdaal ku yimaadaan dalka Mareykanka, lagana mamnuucay in dal ku gal la siiyo”. Ayuu yiri Senator Ayuub.
“Waxa aan dareensiiyay in Ummadda Soomaaliyeed ay aad uga xuntahay go’aankaasi, una aragto mid lagu fogeynayo,Waxa uu ballanqaaday inuu dadaal ballaaran ku bixin doono, una dhaqaaqi doono sidii Soomaaliya looga saari lahaa liiskaasi”. Ayuu hadalkiisa sii raaciyay Senator Ayuub ISmaaciil.
Dhawaan waxaa uu la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka,isagoo warbixin ka siiyay horumarada ay ku talaabsanayso dowladda Soomaaliya,iyo kaalinta ay ka qaadan karaa dib u dhiska dalkooda.
“Shir jaraa’id oo aan si wadajir ah u qabannay ayeynu si wadajir ah ugu hambalyeynay Shacabka Soomaaliyeed munaasabadda 58 guurada ka soo wareegatay markii dalka Soomaaliya uu helay gobonnimada, sidoo kale uu dhacay israaca Gobollada Waqooyi iyo Koonfur, laguna dhawaaqay dhidiba u taagidda Jamhuuriyadda Soomaaliya”Ayuu yiri Senator Ayuub.
Qodobo laga soo saaray Shir looga hadlayay arrimaha maalgashiga dalka oo Muqdisho ka dhacay+sawirro